China Hot Selling ahaziri sze na ezigbo ọnụahịa Mkpakọ Igbe Box ụlọ ọrụ na ndị na -eweta ya Akwụkwọ doro anya
Ọrịre na -ere ọkụ ahaziri sze nwere ezigbo ọnụ ahịa igbe mpịakọta igbe
5) Ọrụ ahaziri iche maka nha dị iche iche maka ndị ahịa
1) Ike siri ike na nguzogide mpịachi nke ọma.
2) Ezi ikike ibipụta.
3) Kwadoro maka usoro nhazi ma enwere ike itinye ya n'ọrụ maka ihe ngwugwu ngwaahịa dị iche iche.
4) Njikwa njikwa siri ike.
5) Ọrụ ahaziri iche maka ihe dị iche iche achọrọ maka ndị ahịa.
Eji ya mee ihe nke ukwuu na Nkwakọ ngwaahịa, Mbipụta na Laminating:
1) Ihe nkwakọ ngwaahịa maka obere igbe, dị ka nri, mmanya, ihe egwuregwu ụmụaka, ọgwụ, igbe akpụkpọ ụkwụ na ndị ọzọ.
2) A na -eji ya ma na -ebunye ya ebe a na -ebi akwụkwọ, ibi akwụkwọ agba otu akụkụ, wee mepụta katọn ndị a na -eji dị ka nkwakọ ngwaahịa, ma ọ bụ jiri ya mee ya, ngwaahịa akwụkwọ ntuziaka.
3) Enwere ike iji ya dị ka mkpado ngwa ahịa, efere na mgbata nkwakọ ngwaahịa ọnya.
Ọbọp na 3 n'ígwé stong PE ntekwasa kraft liner akwụkwọ.
Ejiri ihe nkiri BOPP kechie, kpuchie ya na pallet osisi siri ike, bọọdụ katọn na -echebe akụkụ anọ.
3: ngwugwu ahaziri maka ndị ahịa.
4: TDS gbasara "NINGBO FOLD"
Anyị nwere ike nye gị pls nlele n'efu kpọtụrụ m ma kesaa m adreesị gị doro anya /koodu nzi ozi /onye kọntaktị /akara ekwentị.
Ntị: nha nlele dị ka akwụkwọ A4, ọ bụrụ na inwere ihe pụrụ iche, mee ka anyị mara.
Nke gara aga: Super C1S Folding Box Board/ GC1 osisi ọdụm/ Nnukwu dị na mpịakọta na mpempe akwụkwọ
Osote: OEM ntekwasa C1S ahaziri akwụkwọ Art akwụkwọ mbadamba
Mpempe akwụkwọ APP
C1s Ogwe osisi Fbb
Fbb C1s bọọdụ Ivory
Ogwe osisi 230 Gsm
Akwụkwọ Ibe osisi 250gsm
Ningbo n'ogige atụrụ